शनिबार, ०२ असोज २०७८, ०४ : ०३
जिम लभर सबिन
नायक सबिन श्रेष्ठको ज्यान हेर्दा फिट एण्ड फाइन देखिन्छ। उनले २५ वटा चलचित्र र करिब चार दर्जन -याम ‘सो’ तथा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेका छन्। ३५ वर्षीय नायक श्रेष्ठको हाइट पाँच फिट दस इन्च (५ः१०) र तौल ९२ किलो छ। २० वर्षको उमेरमा जिम सुरु गरेका श्रेष्ठले जिम गर्न थालेको करिब १५ वर्ष भयो।
‘न छोड्न सक्छु, न अर्को बिहे गर्न सक्छु’
म जापान आइपुगेको छ महिनापछि नै मैले मेरा पति अर्की एक महिलासँग सम्बन्धमा छन् भन्ने थाहा पाएँ। त्यो दिन सायद मेरो जीवनको सबैभन्दा खराब दिन थियो।
डर कोरोनाको, संक्रमण इन्फ्लुएन्जाको
सामान्य रुघाखोकी लाग्दा पनि कतै कोरोना पो भयो कि ! भन्ने भयले आजकाल टेकु अस्पताल पुग्नेको संख्या बाक्लै छ। कोरोनाको यस्तो भयलाई चिकित्सकले ‘कोरोना फोबिया’को संकेत दिएका छन्।
स्वप्न स्खलनका कारण
रात्रिजन्य कामोत्तेजना तथा निर्गमन रोक्ने ठोस उपाय नभए पनि केही टेक्निक अपनाएको खण्डमा स्वप्न स्खलन रोक्न सकिन्छ।
माछा थेरापीकाे अनाैठाे उपचार
माछाबाट टोकाएर गरिने थेरापी गर्नका लागि स–साना भुरा माछाको प्रयोग गरिन्छ। नुहाउन मिल्ने किसिमका बाथटपजस्ता सिसाका एकुरियममा माछालाई राखिन्छ। एउटा एकुरियममा करिब एक सय माछा राखिन्छ।
विवाहितसँग रिलेसनसिप कसरी छुटाउने होला ?
अब म उहाँसँग चाहेर पनि टाढा हुन सक्दिन तर उहाँको खुशी र सुखी परिवार देखेर नजिक हुन पनि मन र दिमागले मान्दैन। फोन, भेटघाट कम गर्दा पनि दिमागमा शैतानी कुरा खेलिरहेको हुन्छ।
कोरोना संक्रमित व्यक्तिमध्ये करिव चार प्रतिशतको मृत्युदर देखिएकाले यस किसिमको नयाँ रोग कत्ति संक्रामक हो भन्ने विषय तत्काल भन्न नसकिने चिकित्सकहरु बताउँछन्।
महिलामा गौण स्वप्न स्खलन
पुरुषको किशोरावस्थामा शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन आएझैं किशोरीहरुको पनि शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन हुनु स्वाभाविकै हो।
प्रेम गर्नु भूल हो ?
कहिलेकाहीँ सोच्ने गर्छु, पहिलो प्रेम भुल्न किन गाह्रो हुन्छ होला ? हुन त धेरै जसो प्रेम कहानीमा पहिलो प्रेमलाई नियाल्ने हो भने धेरै जसो बचपनाले भरिएको हुन्छ।
माहुरीबाट टाेकाउने थेरापी
चिल्ने क्रममा माहुरीबाट ‘पेपटाइड मेलिटिन’ नामक हार्मोन निष्कासन हुन्छ। यो हार्मोनले मस्तिष्क सक्रिय राख्ने भएकाले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। यसरी माहुरीले टोक्दा व्यक्तिमा डोपामाइन्, मेलोटोनिन्, इन्डोर्फिनजस्ता खुसीका हार्मोनको निष्कासन हुन्छन्। जसले व्यक्तिमा खुसी उत्पन्न भई तनाव कम हुँदा व्यक्ति मानसिक रुपमा समेत स्वस्थ रहन सक्छ।
हाँसोको काइदा, ज्यानलाई फाइदा
हावापानी तथा वातावरण र खानपानले पनि व्यक्तिको हाँसोमा प्रभाव पार्न सक्छ। रुखबिरुवाको पात झरेर उजाड भएको मौसममा व्यक्ति दुःखी हुनसक्छ भने फूल फुलेको तथा हराभरा वातावरण देख्दा व्यक्तिको मन प्रफुल्लित भई शरीरमा स्वचालितरुपमा खुसीका हार्मोनको निष्कासन भई व्यक्तिलाई हाँस्न त सहयोग पु-याई तनावसमेत कम हुने ढकालले बताए।
कसैले मलाई जिन्दगी के हो भनेर सोध्यो भने, मेरो उत्तर हुनेछ– कहिल्यै नटुट्ने भोगाईहरुको शृंखला जिन्दगी हो। २६ वर्षे जीवनमा मैले जे–जति भोगेँ, त्यसले त्यही भन्छ।
स्वाभाविक रात्रि स्खलन
आफ्ना अभिभावकलाई किशोरावस्थामा हुने उतारचढावका विषयमा किशोर–किशोरीले भन्न लाज मान्छन्। अभिभावकले पनि यस्ता विषयमा भन्न रुचाउँदैनन्। त्यसैले किशोर अवस्थामा प्रवेश गरेका व्यक्तिले साथीभाइ तथा अग्रज व्यक्तिसँग यौवनका विषयमा जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्छन्।
जाडोमा सास लिन कठिन
सामान्य भाषामा श्वासप्रश्वासमा अरोध आई श्वास फेर्न गाह्रो हुने अवस्थालाई दम (आस्थमा) भनिन्छ । दम विभिन्न रोगको लक्षण हो। खोकी दमको एउटा लक्षण हुनसक्छ। पाको उमेरमा हुने यस्तो समस्यालाई चिकित्सकीय भाषामा ‘क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरि डिजिज (सीओपिडी) भनिन्छ।
‘ताइ ची’ व्यायामका टेक्निक
‘ताइ ची’का सफ्ट किसिमका व्यायामका चरणलाई छिटो वा बढी झड्काएको अवस्थामा फास्ट प्रकारको व्यायाम हुन्छ। सामान्यः व्यक्तिले सफ्ट किसिमको व्यायाम गर्नु नै उचित हुन्छ।
यौन र शक्तिको सम्बन्ध
गर्मी मौसमको तुलनामा जाडो मौसम यौन जोडीका लागि यौन क्रियाकलाप तथा यौन सम्पर्क गर्ने उपयुक्त मौसम हो। यो मौसममा यौन जोडीबीच यौनाकर्षण बढी हुनु स्वाभाविकै हो। गर्मीको तुलनामा जाडो मौसममा यौन जोडीले बढी यौन सम्पर्क गर्नुका पनि केही कारण छन्।
ज्यान स्लिम पार्न स्पा
स्पा शारीरिक व्यायाम गर्ने भरपर्दो उपाय हो। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा व्यायामको भरपर्दो उपायका रुपमा स्पाको आकर्षण बढेको देखिन्छ। स्पा गर्नाले व्यक्तिको शरीर फिट त हुन्छ नै। यसले सुन्दर रहनसमेत सहयोग गर्छ।
औंला निलो हुँदा तनाव
हात–खुट्टाका औंलामा निलो हुने समस्यालाई चिकित्सकीय भाषामा ‘रेनड्स’ भनिन्छ। रेनड्स हात–खुट्टाका औंलाको टुप्पा, नाकको टुप्पो, ओठ, कान, जिब्रोजस्ता अंगमा निलो हुने समस्या हो। नाक, कान र जिब्रोमा भने यस्तो समस्या कमै हुन्छ।
म परदेशमा, श्रीमती अर्कैको अँगालोमा
घरमा बूढा आमाबाबा र श्रीमती छोडेर खाडी मुलुक गएँ। खाडीमा काम गर्दागर्दै आमा खसेको खबर पाएर बेहोस भएछु। आमालाई कुनै रोग थिएन। नेपाल आएपछि थाहा पाएँ कि आमाले त आत्माहत्या पो गर्नु भा’को रै’छ !
यौन उत्कर्षको तनाव
यौन जोडीबीचको यौनजन्य क्रियाकलापमा आ–आफ्नै किसिमका धारणा तथा अभ्यास हुन्छन्। अभ्यास र धारणा अनुभवका आधारमा परिमार्जित र व्यावहारिक हुँदै जान्छन्। सामान्यरुपमा भन्नुपर्दा अभ्यासलाई तीनवटा दृष्टिकोणले निर्देशित गरेको हुन्छ।